ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ခိုရေ၀ နိပွန်းး) koreha nippon desu.
Posted by ကြည်ကြည် at 9:53 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 31, 2011 at 11:07 PM
ခရီးသွားနေကြတဲ့ သူတွေရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ ပြန်မျှတိုင်း ညီမလေးလည်း သွားချင်တယ် :( ဟင့် နာလိုဘူးနော် :):)
မမရေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ...
ဘေဘီ September 1, 2011 at 2:45 AM
အဲ့လို ငရုပ်သီး ဒီမှာ ပေါမှပေါ
စားပြီးရင် ရင်ဝမှာ ပူပြီးအောင့်တော့တာပဲ
ကိုယ်ဆို အဲ့ဒါတွေစားစားပြီ အစာအိမ်ဖြစ်တာပေါ့
ငါးပိရေကျိုထဲ မီးဖုတ်ထည့်တာ။ စားလို့တော့ ကောင်းသား
kokoseinygn September 1, 2011 at 3:20 AM
မြတ်ကြည် September 1, 2011 at 4:20 AM
ကြိုက်သွားပြီ။ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ လိုချင်တဲ့ အဓ္ပိပါယ် ကို ဖော်ပြပုံက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။
Mon Petit Avatar September 1, 2011 at 9:15 AM
တက်တူးထိုးရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးယဉ်နေတာ အခုတော့မထိုးတော့ပါဘူးလေ ဟီး တော်ကြာ ရေပူစမ်းမသွားရဘဲနေမှာ။ငရုတ်သီးလဲစားချင်တယ် ကာရာအိုကေလဲသွားချင်တယ်။ သတိ။ သင်ရှာနေသော ဘဏ် မဟုတ်ပါ။
အလင်းသစ် September 1, 2011 at 11:38 AM
ကုလားအော်သီးတွေ မိုက်တယ်..ဟိဟိ..မီးကင်ပြီး ငါးပိရည်ထဲထည့် ပုဇွန်ခြောက်လေးထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူလေးထောင်းထည့် ကွက်တိပဲ...စားချင်လိုက်တာ...ဟီးးးးးးးး။။
san htun September 1, 2011 at 4:08 PM
တက်တူးမထိုးတော့ပါဘူး..တော်ကြာ ရေပူစမ်းထဲ ရေမစိမ်ရဘဲ နေဦးမယ်... D
ကြည်ကြည် September 1, 2011 at 5:45 PM
တစ်လောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ခြေထောက်မှာ အများကြီးထိုးထားတာ သူဝင်ခါနီးမေးတော့ရတယ်တဲ့ ..
ကြည်ကြည်လည်း ထိုးထားတယ်း) ဘယ်နေရလည်းလို့တော့ မမေးနဲ့ ဟီးဟီးဟီး (ညစ်ပတ်လိုက်အုန်းမယ်)
ဒါဆိုသေချာပြီ မိုးယံပြောတာမှန်တယ် ကုလားအော်သီးပေါ့ ဆင်အော်မဟုတ်ပေါ့
မဒမ်ကိုး September 1, 2011 at 6:02 PM
အရင်ကဆို နာမည်ကိုတောင် Yakuza princess လို့ပေးတဲ့
ကိုရင်က ဒီတစ်ခါကပ်ရင် အိမ်ပေါ်ကဆင်းရမယ်ဆိုလို့ ဟီးးဟီးး
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 2, 2011 at 3:32 AM
ရာကူဇာကို တက်တူးထိုးထားတဲ့သူလို့ သုံးနှုန်းတဲ့ အသုံးလေးတော့ ဗဟုသုတရသွားပြီ မကြည်ကြည်ရေ
ရာကူဇာမဟုတ်ဘဲ တကယ်တက်တူးထိုးထားရင်ရော မဝင်ရဘူးလား မသိနော်
တို့တွေကို အစာမကျွေးနဲ့နော် ကျေးဇူးပါ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်လေးလည်း သဘောကျတယ်
နာခံချင်စဖွယ် ချိုချိုသာသာပြောထားတဲ့ စိတ်ကူးလေးဘဲနော်
အပြုံးပန်း September 4, 2011 at 7:09 AM
နို့တစ်ပေးထားတဲ့ စာလေးတွေက သဘောကျစရာပဲနော်၊